Nnwom 64 AKCB - 詩篇 64 CCBT
1Me Nyankopɔn, tie me, bere a mereka me haw;
bɔ me kra ho ban fi ɔtamfo ahunahuna ho.
2Fa me sie fi amumɔyɛfo agyinatu ho,
ne nnebɔneyɛfo pɔwbɔ ho.
3Wɔsew wɔn tɛkrɛma sɛ afoa
na wɔde atirimɔden nsɛm sɔn sɛ mmɛmma werɛmfo.
4Wofi ahintawee mu, tow bɔ onipa a ne ho nni asɛm;
wɔtow bɔ no mpofirim a wonsuro.
5Wɔhyehyɛ wɔn ho wɔn ho nkuran wɔ wɔn amumɔyɛ nhyehyɛe ho,
wɔka sɛnea wobesum wɔn mfiri asie;
wɔka se, “Hena na obehu yɛn?”
6Wɔbɔ ntɛnkyew ho pɔw na wɔka se,
“Yɛayɛ nhyehyɛe a ɛso nni koraa!”
Ampa ara onipa koma ne nʼadwene yɛ anifere.
7Nanso Onyankopɔn bɛto bɛmma abɔ wɔn;
8Ɔbɛdan wɔn ankasa tɛkrɛma atia wɔn
na ɔde wɔn aba ɔsɛe mu;
na wɔn a wobehu wɔn nyinaa de animka bɛbɔ wɔn ti nko.
9Adesamma nyinaa besuro;
na wɔasusuw nea wayɛ ho.
10Ma atreneefo nni ahurusi wɔ Awurade mu
na wɔmpɛ guankɔbea wɔ no mu;
ma wɔn a wɔn koma mu tew nyinaa nyi no ayɛ!
AKCB : Nnwom 64